Warbixintii Jimcada ee masjid Abuubakar iyo Khudbadii Jimcada Feb 20, 2009
Warbixintii Jimcada ee masjid Abuubakar iyo Khudbadii Feb. 20, 2009
Sh. Cumar Xaaladda Masaajidku Waa ka sii daraysaa..
Warbixintii Toddobaadkan ee Masjid Abuubakar oo uu akhrinayo Sh. Cumar: Dhegeyso ama Soo rogo (mp3)
Dad halkaan dagan ee maraykankaa waxay noo Duubeen Fariimo ayaga oo telephone u soo diray Masaajidka Waxaana erayadooda ka mid ahaa Ku laabta wadan kiinii iyo Argagaxiso ayaad tihiin, waxaan og nahay dad kaas in ay Joornaalada iyo War baahinta Maxaligaa ay ka akhriyeen dad wax magarato ah oo anaga naga mid ah wax ay qoreen. (Warbixintii Sh. Cumar Dhegeyso ama Soo rogo (mp3))
Sidoo kale waxaa wax magarato ah Wiilashii tagay iyo Cid ka danbaysay haddii ay Jirto. Sidaas Darteed waxaan Baraarujinaynaa waxay Shareecaddu ka Qabto waxaana ka digaynaa Manhajka iyo Fikirka Khawaariijta.
Khudbadii Jamcaha ayaa ku saabsanayd Fahamka Islaamka oo uu soo jeediyey Sh Abdirizaq Xaashi, waxana uu yiri: Dhiiga Muslimiinta Qiimo weyn ayuu ku Fadhiyaa , Is Qarxintu waa Xaaraan iyo in Gaari laga Buuxiyo Walxaha Qarxa.
Khudbadii Jimcada Feb 20, 2009 ee Sh. C/risaaq Xaashi:
Somali Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
Carabi Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
C/rishaaq Xaashi - File photo
Sidoo kale xalay waxaa masjidka Abubakar lagu qabtay Muxaadarooyin, dib ayaan idin kaga soo tabin doonaa insha allah.
Waxaa isku Soo Duba Riday
Warbixintii Jimce Feb 13, 2009:
Warbixinta Masaajidka Abuubakar Dhegeyso ama soo rogo (mp3)
(Waxaa Akhrinaya Sh. Cumar)